Maxamed Cumar Maxamed | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Aalada casriga ah ee loo yaqaan Robotic ama Robots-ka waa mashiino soo shaac baxay dhexdhexaadkii qarnigii 20aad aadna u qabsaday dunida qarnigan hada lagu jiro ee 21aad. Mashiinadan waa aalodo tikjnoolajiyadeed hoos taga daraasad cilmiyeedka oo loo yaqaan Artificial Intelligence oo ah in mashiinada loo borogaraamiyo in ay u dhaqmaan sida bini’aadamka oo kale. Mashiinadan waxa ay arag ahaan ku shaqeeyaan aaladaha araga sida kaamirooyinka iyo ilaha artificial-ka ah, maqal ahaanna waxay u isticmaalaan microphones-ka. Aalada robotka waxa laga sameeyaa matooro isku tagay iyo jir artifical ah, waxaana hago ama koontoroolo badanaa bini’aadamka laakiin mustaqbalka dhaw waxaa la rajeenayaa in …
Maxaad Ka Taqanaa Nolosha Ka Jirta Kuuriyada Waqooyi?
Maxamed Cumar Maxamed, September 28, 2020
Hadii aad tahay qof dalxiiska jecel hadaba ogaaw Kuuriyada Waqooyi ma ahan goobta kugu habboon kana saar liiska wadamada kuu qorsheysan inaad booqato, laakiinse haddii aad dooneyso inaad wax kasoo ogaato wajiga dhabta ah ee gumeysiga, Kuuriyada Waqooyi waa goobtaada. Inta aanan u guda gelin xaqiiqooyinka qarsoon iyo nolol xumida ka jirta Waqooyiga Kuuriya marka hore isweydii waa wadan noocee Kuuriyada Waqooyi? Waqooyiga Kuuriya waa wadan dhaco bariga eeshiya, xigana waqooyiga marka loo eego wada jirkii Kuuriyada, Biyoonyaang waa caasimada wadankani Kuuriya ahna caasimada ugu weyn dalkaasi, sidoo kale Kuuriyada waqooyi waxaa kunool sida lagu sheegay tirro koobkii u danbeeyay …
Waa kuma jabsade? Badanaa markaad maqasho erayga Hacker waxaa kugu soo dhacayo inuu yahay dambiile tuug ah oo si sharci darro ah dadka u dhaco asagoo adeegsanyo kombuyutarka. Hadaba Hacker ama jabsade waa shaqsi leh xirfad dheeri ah, una isticmaalo kombuyuutar-ka si kabaxsan sidii loogu tala galay. Hacker-ku waxa uu noqon karaa mid wanaagsan, mid xun iyo mid aannan labada dhinacba meel heesan. Erayga Hacker badanaa waxa uu u taaganyahay qof xirfadiisa u isticmaalo si uu helo xog aanan loo fasaxin ama gudaha ugalo system ama nidaam’ aanan loo ogoleyn asagoo wax fasax ah heysan. Tusaale ahaan jabsadaha waxaa laga …
Boqorkii Daroogada, Pablo Escobar
Maxamed Cumar Maxamed, September 23, 2020
Pablo Escobar! Darooga iibiyihii adduunka ugu awooda badnaa, taajirkii nacaska ahaa, dambiilihii dadkiisu jeclaayeen iyo hoggaamiyihii Medallin. Hadaba waa kuma PAPLO ESCOBAR? Pablo Emilio Escobar Gaviria, waa mid kamid ah dambiilayaasha adduunka soo maray kooda ugu weynaa, uguna halista badnaa, Pablo waxa uu ku dhashay magaalada Rionegro ee dalka Colombia. Waxuuna dhashay 1-dii Diseembar sanadkii 1949, kadib dhalashada Escobar qoyskiisu waxa ay usoo wareegeen caasimada Medallin, degmaada Envigado ee isla dalkaasi Colombia. Xilligii yaraantiisa Paplo Escobar waxa uu bilaabay falal tuug iyo burcadnima isugu jiraan sida inuu xadi jiray qalabyo casri ah qiimana kufadhiya asagoo sidoo kale ka qeyb qaadan …